Tonga ny Apple Watch ny 26 Jona. Manana ny fanampianao voafidy ve ianao? | Avy amin'ny mac aho
Tonga ny Apple Watch amin'ny 26 Jona. Manana ny fanampianao voafidy ve ianao?
Hatramin'ny namarotana ny Apple Watch tany amin'ireo firenena sivy voalohany, na dia taloha ela be aza dia hitantsika tamin'ny fivarotana an-tserasera toa an'i eBay ireo doka maro mifandraika amin'ny kojakoja ho an'ny famantaranandro. Iray amin'ireo kojakoja noho ny ankamaroan'ny tompon'ny Apple Watch Tokony hananana izany fanampiana izany hanantonana ny Apple Watch hahafahany mameno azy io ary tsy mamela azy malalaka eo ambony latabatra na eo am-pandriana ary noho izany dia mety hitera-doza ianao.
Rehefa mikaroka ny harato ianao dia hahita fanohanana marobe, ny sasany lafo kokoa, ny hafa kosa miloko kokoa ary ny hafa somary vetaveta. Mikasika ny tsiro amin'ny loko, dia amin'ity lahatsoratra ity isika dia hahita fanohanana isan-karazany amin'ny Apple Watch. Alohan'ny hamakianao azy dia mety hahita modely tianao na tsy tianao ianao ny teboka dia ny hanaitra ny fahalalanao te hahafanta-javatra ary hahatonga anao hanomboka hitady ilay mety indrindra aminao.
Araka ny vola ananantsika taorian'ny nandoavany ny Apple Watch farafahakeliny 349 euro ho an'ny Apple Watch Sport 38mm, azonao atao ny mieritreritra ny manandrana mitady fanohanana mifanaraka amin'ny teti-bolanao sy ny tsirony. Raha ny mahazatra, amin'ny fomba fijeriko rehefa mividy mpanohana ianao dia mila manisa ny toerana hametrahanao azy ary raha mifanaraka amin'ny haingo izay manodidina azy ao an-tranonay. Tsy hividy trano hazo aho rehefa fotsy daholo ny fanaka miaraka amina vy vy. Ohatra iray ity mba hahatakaranao ny tiako holazaina.
Misitrika kely amin'ny Internet dia nahita maodely tsy hita isa izahay, fa ireo izay asehonay anao eto ambany dia nahasarika ny sainay.
Manomboka amin'ny Ny NightStand de web elevlab, fijoroana kanto izay misy loko telo (mena, mainty ary manga) ary manova tanteraka ny foto-kevitr'ireo fanohanana hafa misy eo amin'ny tsena. Mikasika ny farany, azontsika atao ny milaza fa tena mitovy amin'ny plastika amin'ny tadin'ny Apple Watch Sport izy io. Vita vita amin'ny silky sy matte. Ny vidiny dia $ 29 miakatra hatramin'ny $ 38 miaraka amin'ny vidin'ny fandefasana.
Ny safidy faharoa dia avy amin'ny tranon'ny Tranokalan'ny Native Union ho an'ny Dock fanampiana kely dia kely kokoa, izay amin'ity tranga ity dia atambatra amin'ny plastika matte amin'ny vy. Izy io dia misy ampahany roa izay nesorina rehefa nampiditra ilay tariby manafatra. Ny vidiny dia somary avo kokoa mahatratra hatramin'ny $ 49,99, fandefasana misaraka.
Ny safidy fahatelo dia somary mihoa-pefy ary antsoina fiambenana fiambenana Orinasa Teknolojia Griffin. Amin'ity tranga ity, ny fanohanana dia misy tsato-kazo azo esorina izay ahafahanao manodina ny tariby mandritra ny fotoana lava be izay itondran'ny Apple Watch ary hanidy azy avy eo. Izy io koa dia miasa ho fanohanana ny iPhone 6. Na dia eo aza ny fanohanana lehibe kokoa dia milatsaka hatrany amin'ny $ 29,99 ny vidiny.
Izahay dia mamarana ity lahatsoratra ity ho an'ny faralahy amin'ny fianakaviana ary ny fanohanana dia novokarina tamin'ny teknikan'ny Fanontana 3d. Ao amin'ny tranonkala manaraka Azonao atao ny misintona ny fisie ilaina mba hanontana azy amin'ny mpanonta an'ity karazana ity.
Na izany aza, dia misy modely maro dia maro izay azonao jerena amin'ny alàlan'ny fikarohana Google fotsiny. Aza adino ny vintana ary tadiavo ny fanampiana mety indrindra amin'ny Apple Watch anao, araka ny fantatrao, miandry izahay hahafantatra raha hamela anay i Apple manaova famandrihana amin'ny Internet miaraka amina fanangonana manaraka ao amin'ny Apple Store ara-batana na tsia. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miandry ny 26 Jona isika. Manantena isika fa ny tahiry izay nomanin'ireo tao Cupertino ho an'i Espana dia ampy hahafahana manome fahafaham-po ny fangatahana izay hisy tokoa. Fantatrao ve hoe Apple Watch no hovidinao? Hividy tadin-javatra samy hafa ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Tonga ny Apple Watch amin'ny 26 Jona. Manana ny fanampianao voafidy ve ianao?
Gustavo Zapata Arriaga dia hoy izy:
Na ho ela na ho haingana dia ho ahy ianao! tpt
Valiny tamin'i Gustavo Zapata Arriaga
FileMaker Training Series dia eto amin'ny FileMaker 14
Ny fampiharana LastPass notafihin'ny hackers